नुवाकोटमा भेटिए अचम्मका गायक, एउटै मान्छेमा यति धेरै प्रतिभा यसरि हावामा उडेपछि.. सबै चकित हेर्नुहोस – Complete Nepali News Portal
नुवाकोट । एउटा मानिसस“ग के के कला हुन सक्ला ? तपाई अनुमान लगाउनु त । तपाईको बिचारमा मान्छे एक कला अनेक भन्ने सोच पनि आएको होला । हो आज हामी कुरा गर्दैछौ यस्तै एक जना प्रतिभाबान र क्षमताशील एकजना भाईको बारेमा । उनले के गर्न सक्दैनन होला भनेर सोच्दानै आफै अचम्ममा परिन्छ । नवाकोट निबासी यि भाईको नाम हो मिलन तामाङ जो अहिले कृषि पेशा लिएर रोजगारीको शिलशिलामा छन । दिनरात कृषिमै लगानी गरेर आफनो जिबिकोपार्जन पनि गरिरहेका छन ।
कृषि र गार्डेनिङ गरेर आफनो जिन्दगी धानीरहेका मिलन त्यो माध गर्दैनन उनी बडी बिल्डर हुन भन्दा नि फरक नपर्ला ? अझ त्यसैमा उनी प्रकृतिबाट सजिएका एक अब्बल बडी बिल्डर हुन, यतिमात्र हैन उनी जिम्नायाष्टी पनि यसरी हान्छन कि लाग्छ उनले हावास“गै मित लगाएर हावामै उडीरहेका छन । यो मात्र हैन यिनको कला यिनको मुख्य प्रतिभा त गिटार बजाउदै यसरी मन्त्र मुग्ध स्वरले सबैलाई लट्ठ पार्नु हो । एउटै मान्छेमा यति धेरै प्रतिभा भएका यिनको यो भिडियो हेर्नुस र आफै अनुमान लगाउनुस |
तनहुमा ना#ङगै हीड्ने मानिसको घरमा पुग्दा यस्तो अबस्थामा भेटीयो हेर्नुहोस...
पोखरामा फिल्मी सैलिमा देउसै नगर बस भित्रै चोरी ! हेर्नुहोस...